Sababaha aadan ugu raaxaysan galmada sida lamaane | Bezzia
Sababaha aadan ugu raaxaysanayn galmo ahaan lammaane ahaan
Maria Jose Roldan | 31/08/2021 22:10 | Galmo
Dadbadan, u galmoodka lamaanahaaga gabi ahaanba ma wanaagsana. Waxaa jira dhowr arrimood oo saamayn taban ku yeelan kara galmo lala sameeyo qofka aad jeceshahay. Cadaadiska maalinlaha ah ee fudud ayaa ka mid noqon kara sababaha uusan qofku ugu raaxaysan galmada.
Maqaalka soo socda waxaan ku siineynaa dhowr sababood oo sababta ay u adkaan karto ku raaxeysiga galmada lammaane ahaan iyo waxa la sameeyo si aanay taasi u dhicin.
1 Maxay u jiraan dad aan ku raaxaysan galmada lamaanahooda
1.1 Adkeysiga si aad u qanciso lamaanaha
1.2 Ku xanuunsada dhismayaasha jirka qaarkood
1.3 Rabitaan si loo gaaro orgaanku
1.4 Xanuun qalalan siilka
Maxay u jiraan dad aan ku raaxaysan galmada lamaanahooda
Jinsigu waa wax u dhexeeya laba waana muhiim in raaxadu ay wada jir tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhacdooyin qaarkood inkasta oo galmo lala sameeyo qofka aad jeceshahay, raaxaysigu ma buuxsamo Haddii taasi dhacdo marar badan, waxay saamayn taban ku yeelan kartaa mustaqbalka wanaagsan ee lammaanaha. Waxaan kaala hadli doonnaa qaar ka mid ah sababaha qanacsanaanta galmada la sheegay iyo sida looga hortago:
Adkeysiga si aad u qanciso lamaanaha
Waxaa jira waqtiyada mid ka mid ah labada dhinac uu aad u xooga saaro qancinta rafiiqa oo iska iloobo naftiisa. Waxaas oo dhami waxay dhalin karaan cadaadis iyo walaac aad u sarreeya oo aakhirka yeelanaya saamayn taban marka ay timaaddo galmo. Si looga hortago inay taasi dhacdo, qofku waa inuu si buuxda u nastaa oo si buuxda uga qayb qaataa dhaqanka galmada. Galmada, labada dhinacba waa inay bixiyaan sidoo kale helaan.
Ku xanuunsada dhismayaasha jirka qaarkood
Dhibaatooyinka dhismayaasha jirka qaarkood ayaa ka dhigi kara qofka inuusan awoodin inuu galmo buuxda la yeesho lamaanahooda. Waa inaad ka tagtaa dhismayaashaas dhinac oo aad ku raaxaysataa galmada qofka aad jeceshahay. Faa’iido ma leh in laga war hayo wax iyo aad la kulanto cadaadis gaar ah marka aad galmo la samaynayso lamaanahaaga.
Rabitaan si loo gaaro orgaanku
Marar kale, qanacsanaan la'aantani waxaa sabab u ah waswaaska mid ka mid ah dhinacyada si uu u gaadho kacsiga. Waxaad ka fikiraysaa orgasmkaaga iyo kan lammaanahaaga, taasoo horseedaysa xaalad welwel leh oo aan u wanaagsanayn galmo tayo leh. Looma baahna in la gaaro orgasmka marka aad sariirta kula raaxaysanayso lamaanahaaga. Mararka qaarkood galmadu waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan xitaa haddii aadan gaarin dhammaadka ugu dambeeya.
Xanuun qalalan siilka
Qallaylka siilka ayaa ah dhinac kale ama qodob ka hor istaagi kara dumarka inay ku raaxeystaan ​​galmada. Qallayl ka dhaca aagga siilka ayaa keena in galmadu noqoto mid xanuun badan oo ma jirto meel lagu raaxaysto. Haddii tani dhacdo, waxaa habboon in la isticmaalo saliid siilka si looga fogaado xanuunkaas.
Gaaban, galmadu waa inay noqotaa wax gebi ahaanba u roon labada qof ee lammaanaha ku jira. Ma noqon karto in daqiiqada ficilka galmadu ay noqoto wax naxdin leh iyo in aysan ku qancin mid ka mid ah dhinacyada. Waxaa muhiim ah in la helo sababta ama sababta ka dhigaysa galmada mid aan wanaagsanayn oo la helo xal wax ku ool ah. Xilliga ficilka galmada aad ayuu muhiim ugu yahay lammaanaha dhexdiisa waana in la xaqiijiyaa in ay labada dhinacba u tahay waqti wacan oo qaas ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Galmo » Sababaha aadan ugu raaxaysanayn galmo ahaan lammaane ahaan
4 waxqabad oo la sameeyo Dayrta dibedda
Faa'iidooyinka minimalism ee caafimaadka maskaxda